Barcelona oo xasuuqday Girona – Suarez oo sadexley dhaliyay & Coutinho oo shabaqa gaaray – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeCIYAARAHABarcelona oo xasuuqday Girona – Suarez oo sadexley dhaliyay & Coutinho oo shabaqa gaaray
Barcelona oo xasuuqday Girona – Suarez oo sadexley dhaliyay & Coutinho oo shabaqa gaaray
February 25, 2018 Cabdi nuur CIYAARAHA 0
Barcelona ayaa xasuuq aan caadi aheyn u geysatay kooxda Girona iyagoo aad u dheereystay hogaanka horyaalka La Liga maadama ay 14-dhibcood ka fogaadeen Real Madrid sidoo kalana ay 10-dhibcood ka fogaadeen Atletico Madrid oo aan wali ciyaarin.
Barcelona waxey laheyd waji laga cabsado bilowgii maadama Valverde uu go’aansaday inuu garoon ku kulmiyo Messi, Suarez, Dembele iyo Coutinho kuwaas oo dhamaantood weerka ka qeyb galayay.
Barcelona gool ayaa looga naxsaday bilowgii ciyaarta waxaan ka dhaliyay xidiga Portu la yiraahdo, wuxuuna ahaa qalad ay wada geysteen Umititi iyo goolaye Stegen.
Barcelona durba waxey ka bixiyeen jawaab maadaama Messi uu kubad aan caadi aheyn u gudbiyay Suarez, isna wuu dhameystiray waliba iyadoo uu saaran yahay cadaadis xoog leh.
Lionel Messi ayaa laba gool is raacsaday, midna wuxuu ka xariiftamay laba difaac si uu goolkaas u dhaliy daqiiqadii 30-aad, midna wuxuu ahaa laad xor ah oo waliba si joog hoose ah loo dhaliyay, waxeyna aheyd khiyaano uu sameeyay xidiga reer Argentina.
Luis Suarez ayaa qeybta hore ciyaarta goolasha soo xiray, kubad hadiyad ah ayuu ka helay Coutinho kaas oo goolhayaha kubad usoo dhaafiyay si tartiib ah ayuuna shabaqa ugu shubay.
Qeybtii labaad Barcelona waxey dhalisay laba gool waxaana shabaqa soo taabtay Philippe Coutinho oo dhaliyay goolkiisii labaad ee waayahiisa Barcelona iyo goolkiisii koowaad ee La Liga.
Sidoo kale Luis Suarez ayaa sadexley dhameystiray, wuxuuna si fiican u dhameystiray kubad uu ku caawiyay Ousmane Dembele.
Natiijada waxey ku dhamaatay 6-1, Barcelona ayaa gaartay guul weyn, waxeyna durba sii adkeysteen hogaanka La Liga.
QM Oo DFS Ka Taageereyso La Dagaalanka Al Shabaab
Wasaaradda Amniga Oo Baaq U Dirtay Shacabka Muqdisho
41,126 total views, 1,879 views today
41,126 total views, 1,879 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,199 total views, 1,879 views today
41,199 total views, 1,879 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,211 total views, 1,879 views today
41,211 total views, 1,879 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,236 total views, 1,880 views today
41,236 total views, 1,880 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,264 total views, 1,877 views today
41,264 total views, 1,877 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]